Shenzhen Office Isungulwe
Ngokuthuthuka kweminyaka eyi-14, thina, i-Yueqing Leyu Electric Automation Co., Ltd, sandisa ububanzi bethu bokuthengisa emikhiqizweni ye-soalr, efana ne-solar inverter, isilawuli selanga. Ihhovisi lethu e-Shenzhen, lapho idolobha elidume kakhulu phakathi kwabathengi bakwamanye amazwe, eliqhele ngesigamu sehora ukusuka e-Guangzhou, lasungulwa ...
Ikhasimende laseRussia livakashele inkampani yethu izolo futhi linentshisekelo ekunikezeni kwethu amandla kagesi. Uthathe amasampula athile ukuze ahlole ikhwalithi, wabe esefaka i-oda lenqwaba. Sesineminyaka engu-14 senza ugesi, futhi singabahlinzeki begolide e-Alibaba, siyaqiniseka ngekhwalithi yethu. Samukela a...
LEYU Buyela Emsebenzini
Amakhasimende Athandekayo, Ngemva kwefestivali yaseNtwasahlobo yesikhathi eside, i-LEYU ibuyela emsebenzini namuhla (Feb.27th). Yamukela imibuzo yakho mayelana nokuphakelwa kukagesi, isishintshi samandla njll. Imibuzo yakho izophendulwa engakapheli amahora angu-12. Ngiyabonga. Iqembu lokuthengisa le-Leyu
2021 Qalisa Kabusha Isikhathi Ngemva Komkhosi Wasentwasahlobo
Khasimende Elithandekayo, sinqume ukuqalisa kabusha umsebenzi ngemva koMkhosi Wasentwasahlobo omude ngomhla zingama-27 kuNhlolanja. Ngaleso sikhathi, ungazizwa ukhululekile ukuxhumana nathi mayelana nama-oda akho amasha. Ngenxa yokuthi amakhasimende amaningi afake i-oda ngaphambi komkhosi, imboni yethu izoba matasa kakhulu. Uma udinga ukunikezwa kwamandla, i-inverter yamandla njll, ...
2021 Isaziso Seholide Lomkhosi Wasentwasahlobo
Khasimende Elithandekayo, Siyakukhumbuza ukuthi izimboni eziningi e-China zizoyeka ukusebenza phakathi noMkhosi Wasentwasahlobo. Amaholide e-Leyu azoqala kusukela ngomhla ka-4 kuFebhruwari kuya kumhla zingama-25, ngoFebruwari ngo-2021. Ngokombono, ama-oda amaningi aqinisekiswe ngaphambi komhla zingama-20 kuJanuwari, 2021 angase athunyelwe ngaphambi kweholide. Nokho, zonke...
I-Inverter yamandla 5000w, Ishaja yesilawuli seSolar, I-Inverter yamandla, Ukunikezwa kwamandla okuguquguqukayo, ukunikezwa kwamandla okuphuma kabili, I-Solar Power Converter,